कस्लाई कस्तो प्रतिक्रिया, को हुदैछ टप ५ बाट आउट ? « Mazzako Online
कस्लाई कस्तो प्रतिक्रिया, को हुदैछ टप ५ बाट आउट ?
नेपालमा पहिलो पटक अन्र्तराष्ट्रिय स्तरकोे रियालिटी शो नेपाल आइडल अन्तिम चरणमा तर्फ अधि बढ्दै गएको छ । बिहिबार टप ५ को प्रस्तुति रह्यो । यतिखेर केहीको चर्चा छ भने नेपाल आइडलकै चर्चा छ । चिया पलसमा हुने गफ देखी लिएर हरेक स्थानमा आइडलकै बिषेश चर्चा हुने गर्दछ ।
हिन्दु महिलाहरुको महान चार्ड तीज समेत परेकाले बिहिबारको प्रस्तुतीमा रमाइलो माहौल त बन्यो नै त्यस माथि गेष्ट जर्जको रुपमा आएका चर्चित गायक प्रमोद खरेलको उपस्थितीले नेपाल आइडलको माहोल अझ गर्मायो । तर, ध्यान भने भोली अर्थात शुक्रबार को बाहिरिएला भन्नेमा छ । गत साता सुरज थापा बाहिरिए पछि ठुलै बहस चल्यो । सबैका फेशबुकका भित्ताहरुमा सुरज थापालाई पोखियो ।
बिहिबार सागर आलेले ‘तिम्लाइ छुने बतास’ बोलको गीत गाएर जर्जहरुको वाहावाही पाए । ‘परेलीमा’ बोलको गीत गाएका नेपाल आइडलका अर्का दमदार प्रतिस्पर्धी निशान भट्टराईको प्रस्तुतीलाई समेत जर्जले मज्जाले रुचाए । त्यसै गरि नेपाल आइडलकी प्यारी छोरीको उपमा पाएकी सुजता पाण्डेले गाएको ‘पल पल तिम्रै सम्झनामा’ बोलको गीतलाई मन मात्र पाराएइन्, बिहिबारको प्रस्तुती मध्येबाट उत्कुष्ट हुदै गिटार समेत आफ्नो पोल्टामा पारिन् । बुद्ध लामाले ‘चुलेसी’ बोलको प्रस्तुतीबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाउदा ‘हिड्दा हिड्दै’ गीतबाट प्रताप दासले समेत चित्त बुझ्दो प्रतिक्रिया पाए ।
यसरी हेर्दा नेपाल आइडलका पाचै जना प्रतिस्पर्धी कोही भन्दा कोही कम छैनन् । रियालिटी शो को नियम अनुसार एक जना बाहिरिनै पर्ने हुन्छ । त्यसैले शुक्रबार समेत एक जना बाहिरिने छन् । मज्जाको अनलाईनको तर्फबाट सबै प्रतिस्पर्धीलार्ई शुभकामना ।